कलाकारहरु हाम्रो देशको गहना हो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिनु हुन्न
मिल्ने भए यो छाती चिर्दिन्थे मायाको गुण मायाले तिर्दिन्थे भने जस्तै शायद हुने भए जलेको यो मुटुको आगो आफैले निभाउने कोशिस गर्थे होला तर नसकेर होला तपाईंहरु सबैको साथ खोजेको छु । लामो समय देखी मेरो मनमा सानो एउटा कुरा खेल्दै आएको छ । जुन कुरा म तपाईंहरुलाई पनि बाँड्न चाहान्छु ।
हुन त खासै त्यति जाहेज कुरा नहुन सक्ला तर पनि मलाई कता कता अलिक फरक महशुस भएको छ । लामो समय देखी कोरियाली भूमिमा बसोबास गर्दै आएका धेरै साथीहरुसँग चिर परिचित पनि भइयो अनि धेरै संघ संस्थाहरुसंग हातेमलो गर्ने मौका पनि मिल्यो । त्यहि क्रममा बेला बखतमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरु पनि हेर्ने मौका पनि पाइयो । आफ्नो मतृभूमिको मायालाई आफ्नो मुटुको माझमा सजाउदै हाम्रो लोक संस्कृतिलाई जोगाइ राख्न हामी सफल भएका छौ । त्यती मात्र नभएर हाम्रा राष्ट्रका गहना हाम्रा कलाकारहरुलाई पनि हामीले बेला बखतमा निमन्त्रणा गर्ने गरेका छौ र उहाँहरुले विश्वका कुना काप्चाका देशहरुसँग मितेरी गास्ने मौका पाउनु भएको छ ।
आफ्नो सस्कृतीलाई जोगाइ राख्न र राष्ट्रका गहनाहरुलाई खुशी राख्न हामीले बेला बखतमा उहाँहरुलाई निमन्त्रणा गर्नु हाम्रो दायित्व र हाम्रो कर्तब्य हो जस्तो लाग्छ मलाई । शायद यही दायित्व र कर्तब्यलाई सबै संघ संस्था वा व्यक्तिहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभएकोले होला हरेक देशमा बस्दै आउनु भएका नेपालीहरुले बेला बखतमा निमन्त्रणा गरेर हाम्रो लोक सँस्कृतिलाई जोगाइराख्नु भएको पाएका छौ । लाग्छ शायद हाम्रा कलाकारहरु हामी बिदेशमा बसोबास गरेका नेपाली दाजुभाइहरुसँग त्यती माया गर्नु हुन्छ, खुशी हुनुन्छ अनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर देश बिदेश पाल्नुहुन्छ । तर मलाई एउटा सानो कुराले बारबार मनपोल्ने गरेको छ कतै हामीले निमन्त्रणा गरेका कलकारहरु निराश त राखेका छैनौं ? कसैलाई काखा अनि कसैलाई पाखा गरेका त छैनौं ? त कसैलाई बाहिरी हासो हसाएर भित्री मन दुखाएका त छैनउ ? हुन त आजसम्म कुनै कलाकारले गुनासो पोखेको सुनेको त छैन तर पनि मैले कता कता हामी बाट एउटा सानो गल्ती भएको छ कि त जस्तो मलाई भान भएको छ । हामी कार्यक्रमको आयोजना गर्छौ अनि एउटै आगनमा हाम्रा गहनाहरुलाई आमन्तृत गर्छौ र हामी हाम्रो सस्कृतिलाई आगाडी बडाउदै लान्छौ यसै क्रममा एउटै आगन्मा बोलाईएका कलाकारहरुलाई त्यो आगनमा समान माया दिन सक्नु पर्ने हाम्रो कर्तब्य हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
एउटै स्टेजमा आउनु भएका कलाकारहरुलाई त्यही स्टेजमा समान सम्मानका साथ राख्न सक्नु हाम्रो महान गुण र हाम्रो कर्तब्य हो जस्तो मलाई लाग्छ । यसको मतलब तपाईंहरुले कलाकारको सम्मान नै नगर्नु भन्न खोजेको त होईन कतै कलाकारहरुको सम्मान गर्दा गर्दै थोरै मन दुखाएका त छैनौ भन्न मात्र खोजेको हु । मेरो नजरमा अथवा मेरो मनले थोरै हामी चुकेको महसुस गरेको छु । एउटै स्टेजमा आउनु भएका कलकारहरुलाई प्रोग्राम हुँदै जाँदा त्यही स्टेजमा बिच तिर गएर संगै आएका कलाकारहरुलाई भेदभाब गर्दै जातिय, क्षेत्रीय वा अन्य सो इच्छाले होस हामीले व्यक्ती व्यक्ती चुनेर सम्मान कार्यक्रम गर्ने गरेको पाएका छौ । कतै यसरी एउटै स्टेजमा आउनु भएका कलाकारहरुलाई छुट्टाएर सम्मान गर्दा के अरु कलाकारहरुको मन नदुख्ला र ? कसैलाई काख कसैलाई पाखा गरेजस्तो भान नहोला र ? मलाई त लाग्छ हामीले अप्रत्यक्ष रुपमा कलाकारहरुको मन दुखाएका छौ ।
प्रसङ्गवश मैले एकचोटी प्रोग्राम हेर्दा खेरीको एउटा सानो भाग अझै मेरो कानमा गुन्जिरहन्छ । प्रोग्राम आफ्नै गतिमा चलिरहेको थियो दर्शकहरु अति नै खुशी थिए र कलकारहरुले पनि जतिसक्दो खुशीका कोशेलीहरु पस्कदै थिए । संयोगबश बिचमा त्यो टीम मध्येका कुनै एक कलाकारलाई कुनै एक क्षेत्रले सम्मान गर्छ त्यहाँ सबै हर्ष र खुशी नै छन कलाकार अनि दर्शकहरु ।
सम्मान कार्यक्रम सकिन्छ साँस्कृतिक कार्यक्रम शुरु हुन्छ अनि एकजना हाँस्य कलकारको प्रबेश हुन्छ । उहाँ पनि खुशी त देखिनुहुन्छ अनि दर्शकलाई खुशीको कोशेली बाँड्दै जाँदा उहाँले यसरी भन्नु भएको थियो "वहाँलाई त यो यो संस्थाले सम्मान गर्ने तर मलाई चै सम्मान गर्ने कसले ?" अनि दर्शकको भीडबाट बुलन्द रुपमा आवाज आउछ "हामीले" अनि फेरी मुसुक्क हाँस्दै भन्नुहुन्छ "धन्यबाद्" तपाईंहरुको यो मिठो माया नै मेरो लागि काफी छ । म यही मायालाई मुटुभरी लिएर नेपाल फर्किनेछु अनि सबैको सामु खुशी बाड्नेछु ।
हुनत उहाको मन दुखेको थिएन होला केबल दर्शकलाई कसरी तताउने भनेर अगाडी बढ्नु भएको थियोहोला तर मैले गहिरिएर सोच्न थाले हजुरहरुले पनि एक चोटी गहिरिएर सोच्नुस्त !! कतै हामीले साच्चै उहाहरुको मन दुखाएका त छैनौं ? त्यसैले साथीहरु हुनत मैले कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको त होईन । मेरो सोचाइ नै अलिक कमजोर भएको हुन सक्छ । त्यसैले मेरो सानो अनुरोध के हो भने हामीले एउटै आँगनमा आएका कलाकारहरुलाई एउटै आँगनामा छुट्टाएर सम्मान गरिनु भन्दा कुनै बिशेष ठाउँमा इच्छाएको कलकारलाई बोलाएर सम्मान गर्नु राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ । अन्तत: साथीहरु "बाध्यताबश परदेशीए पनि आफ्नो कला, सस्कृति, परम्परा, जन्मभूमिको माटो अनि नेपाली एक हौ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन भन्ने बिश्वका जुनसुकै कुनामा छरिएर रहेका नेपालीहरुले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा मलाई लागेको छ ।
मैले कुनै पनि ब्यक्तिलाई सम्मान गरियो र कुनै पनि संस्थाले सम्मान गर्यो भनेर आरोप लगाउन खोजेको चाहिं होईन । केबल सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँको सम्मान गरेको मात्र हु । सबैलाई चेतना भया ।